Dọ aka na ntị maka akara nke anụ ọhịa ahụ 666
Akwụkwọ Nsọ dọrọ aka na ntị megide akara a - mgbe ahụ ọ bụkwa ọrụ Ndị Kraịst anyị ime ya. 0
Are na-adịghị azọpụta naanị n'ihi na ị bụ onye Juu Muslim ma ọ bụ idina ụdị onwe
Ekwela ka a ghọgbuo gị 0
Eziokwu banyere FO Nilsson
Akwụkwọ Baptist Baptist nke mbụ 151 0
Jisos na Chineke ra, rahuru mmadu, nwua nelu obe Chineke buliri ya elu
Baịbụl mere ka ihe Jizọs kwuru doo anya. 0
Mgba ọgwụ dijitalụ - ejiri ụma mee ihe na-eri ahụ
Oge eruola ịmalite ịwepụ onwe anyị, na ụmụ anyị, site na ekwentị na-eri ahụ. 0
Atọ ndị a bụ otu
Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ bụ otu. 0
Onye mere mpụ ahụ tiri mkpu Allahu akbar mgbe ọ na-ama ndị mmadụ ụra na Vetlanda
A nụrụ mkpu agha ndị Alakụba na Vetlanda - Onyeàmà na-agwa 0
Mwakpo ụjọ na ebe 5 na Vetlanda - 8 merụrụ ahụ
Lelee vidiyo ndị ọzọ! Onye na-eyi ọha egwu wakporo ebe ise dị iche iche na Vetlanda, mmadụ merụrụ ahụ nke ukwuu. 0
Ọwa TikTok Apg29.nu - Ugbu a karịrị ndị na-eso 22,000
Ọwa Christer Åberg abụrụla ihe ịga nke ọma n'ịntanetị. 0
Sinbọchị Mmehie Worldwa - ọ dị?
Onwere ụbọchị na-etinye anya na mmehie nke ụwa? 0
Vecka 18, söndag 9 maj 2021 kl. 22:18